Howlsocodsiinta-720 Automatic Howlsocodsiinta Cup Samaynta Machine - Shiinaha Guangdong Jinxin Makiinado
Extruder Sheet caaga
Film Machine kacey
Buuxinta Oo Awdida Machine
Dhalo Machine u babanaya
ASPII Taxanaha caaga Sheet Extruder
Machine Making HPC Taxanaha Automatic Haydarooliga Cup
YB Taxanaha Curved oogada mowjadda Machine Daabacaadda
XC Full Automatic High-xawaaraha Vacuum Machine U samaynta
Howlsocodsiinta-720 Automatic Howlsocodsiinta Cup Samaynta Machine
Port: Ningbo ama Shanghai Port
Nooca / Halbeegyada Howlsocodsiinta-720
Waxyaabaha Available PP, PE, PET, HIPS, GPPS
Aagga la aasaasay (mm) 720 × 450
Qoto-dhafka ah (mm) 180
Speed-dhafka ah (wareegyada / min) 20-35
Max. Width (mm) 720
Dhumucdiisuna (mm) 0.3-2.0
Power of Machine The Dhan (kw) ≤ 55
Air bilaa (MPA) 0.6-0.8
Bilaa Water (m3 / h) ≤ 0.5
Aragti (mm) 6200 × 2800 × 2600
Thermoforming xirxiraan weel sida koob, sanduuqyada iyo maddiibadihii. Sida koob caano, koob jelly, koob jalaato, koob hal mar ah, fijaan nuudhalka deg dega ah, sanduuqyo cunto degdeg ah iyo wixii la mid.
Mashiinka 1. isticmaalaa qaab-dhismeedka afar-column, la socod ah oo siman, buuq yar yahay, xoog ku tirtirayaan xoog iyo wixii la mid ah.
isdhexgalka gaaska 2.Mechanical iyo korontada, Howlsocodsiinta sax sare inay shabaqa soo diri, Howlsocodsiinta taagay, PLC gacanta mooshin Howlsocodsiinta, heerkulka gacanta ku module control system caaqil.
3.A gob ah qalabaynta, xawaaraha wax soo saarka. Iyada oo rakibo of wasakhahaasi kala duwan soo saari karaan waxyaabaha kala duwan, si loo gaadho ujeedada ah mashiinka isticmaalka badan.
4.By isticmaalaya keeno brand-magaca qaybaha korontada, qaybaha pneumatic, si loo hubiyo in hawlgalka deggan, oo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo, nolosha adeeg dheer.
5.The dhismeedka dhan dheggan, cadaadis, wax taaj oo kale, goynta, qaboojinta, wax soo saarka daheysha iyo hawlaha kale ee ku xusan in caaryada ah, sidaa darteed habka wax soo saarka waa la soo gaabiyey, fasalka sare dhammaadeen, oo waafaqsan heerarka caafimaadka qaranka.
Mashiinka 6.The ku haboon yahay wax soo saarka ee PP, PE, PET, HIPS, GPPS iyo alaabooyinka kale ee bac. Sida koobabka, dhalooyinka, koobabka iyo weelasha kale dhuuban-saareen alwaaxdii saqafka haysay, sida koob caano, koob jelly, koob jalaato, koob la cabbo tuuro, baaquli baasto deg dega ah, sanduuqyo cunto iyo wixii la mid ah.
: Previous HPC -860 Automatic Haydarooliga Cup Samaynta Machine
Next: WJ Taxanaha qalabka xafiisyada caaga Sheet Extruder
Automatic Cup Samaynta Machine
Automatic caaga Cup Samaynta Machine
Qalabka Cup U samaynta
la tuuro Cup Samaynta Machine
aqbasho Samaynta Machine Cup
Si buuxda u Automatic Samaynta Machine Cup
Haydarooliga Cup Samaynta Machine
Samaynta Machine Butros Cup
caaga Cup Samaynta Machine
Makiinado caaga Cup Samaynta
Samaynta Machine pp Cup
Small caaga Cup Samaynta Machine
HPC -860 Automatic Haydarooliga Cup Samaynta Machine
Machine HPC-720 Automatic Haydarooliga Waayo, weel ubaxa
ASPII110 / RCX700 Midaynta Extrusion Sheet ...
RCX-700 Automatic Janjeeri-caaryada Cup Samaynta Machine
Machine Making RCX Taxanaha Automatic Cam Cup
Ku dar: JINXIN Industrial Zone, HuaXinCheng, ChaoShan Road, Shantou City, Gobolka Guangdong, Shiinaha